izithasiselo eziphilayo - kungcono singakabi sibi kangako. Ngezinye izikhathi bangakwazi ukusiza ukwenza i-ngenxa yokuswela amavithamini namaminerali emzimbeni. Thatha izinto ezinjalo kukhona abadala nje kuphela kodwa futhi izingane. Ngokwesibonelo, sekuyinto umkhiqizo ethandwa kakhulu ngokuthi "Smart Omega". Futhi manje sesine ukufunda yona. Ngempela, abazali abaningi banake "imithi." Ngiyiyeke enganeni yami? Ingabe uyoba yini umphumela? Konke lokhu manje, futhi kuzoxoxwa.
Okokuqala, ukuthi izophenya esebenzisa incazelo. Kuyinto njalo kubalulekile ukuqonda ukuthi ingane kuzothatha. Mhlawumbe ungenza ngaphandle izidakamizwa ezengeziwe nemithi!
Into wukuthi "Omega Smart" - lena into enjalo Izithako vitaminized. Kuyinto capsule encane ukuthi kuyodingeka ukuba igwinye. Singasho sithi kuba amavithamini ezivamile. Bakhonza ukulondoloza uhlelo wengane mzimba, kanye ekusunguleni uhlelo senhliziyo nemithambo yegazi. Ngokuvamile, lokhu izidakamizwa ngezinye izikhathi obizwa nangokuthi "umfundi Energizer". Futhi ukuthatha izingane zakhe ukuthuthukisa ekusebenzeni kobuchopho. Njengoba ubona, into eyinqaba kule. Vele nezithasiselo, nokuthi kangaka. Kodwa ingabe ikhona yini imivuzo ke ukuba banake ke? Yiziphi izinzuzo nezingozi "Omega Smart" kukhona?
Kungaba kuhle ukwazi ekuqaleni, uma lokhu izidakamizwa sona sinikwe othe xaxa njalo. Phela, uyoba nohlobo oluthile ubufakazi. Specific, hhayi generalized. Ngokwemvelo, iyiphi. Futhi ukuba sikuqonde kalula kakhulu.
Into wukuthi "Smart Omega" ukuze kufundiswe izingane ofunda lokhu amaphilisi kufanele inikwe zonke izingane ukuthuthukisa umsebenzi, kanye ekuvimbeleni sifo of "engunaphakade 'ukukhathala. Ngaphezu kwalokho, uma lowo mfundi waphawula ukudangala, ukungakuthandi ukudla, kwehle amasosha omzimba noma imemori ukungakhuli, ukuhlobanisa izinto, futhi, ungazuza Izithako namuhla yethu. "Smart Omega" - liphinde umthombo obengeziwe ngamavithamini A, C, D. kudokotela wabo kusilela angabeka izidakamizwa nengane. Abaningi baphikisa ngokuthi okufakiwe begazi "Omega" - liphinde umsizi enkulu ekuthuthukiseni ngokomzimba ubuhlakani umfundi.
Njengoba kule "isidakamizwa" kukhona izinkomba ezithakazelisayo ukuze ukusetshenziswa, kuyoba ezithakazelisayo ukwazi ukubunjwa izimali. Kungani "Omega Smart" ngakho ewusizo izingane? Yini ekhethekile ngakho?
Ngo "Smart Omega" ukuze kufundiswe izingane uthi okufakiwe begazi siqukethe kuphela izithako zemvelo. Iqukethe amavithamini (A, C, D), kanye ngengcina yezinyosi, futhi, okubaluleke kakhulu, amafutha izinhlanzi. Khona-ke lonke Ukwakheka uphela.
Okusho ukuthi, ungenza esiphethweni esinengqondo - izindlela zethu zamanje kuyinto Amavithamini namafutha kafishi. Ngoba nje le ngxenye kungekho ingane utawemukela. Kodwa ezicashe Vitaminka - kalula. Ngakho ngesaba yini imiphumela emibi Akufanele uzizwe zinkulu. Kunoma yikuphi, ngakho uthi imfundo.
Idumela yimuphi umuthi ziwumthwalo isinyathelo yayo izindleko zawo. Futhi amavithamini nabo bayajabula. "Smart Omega" izingane, intengo zazo kuyahlukahluka ezindaweni ezihlukahlukene zezwe, uma ngikhuluma iqiniso, hhayi injabulo yangempela. Ngoba ngokuvamile izindleko imayelana 650-700 ruble iphakethe ngalinye.
Uma ngikhuluma iqiniso, amakhasimende anelisekile kakhulu nalesi simo. Ngempela, Pharmacy ungathola futhi ashibhile izindlela nozakwabo. Nokho, uma udokotela uye ebekiwe ke "Smart Omega", kuyodingeka ukuba siphinde siphile ngayo. Ngaphezu kwalokho, abazali abaningi izindleko ayibalulekile kakhulu. Kunezinhlobo ezingaphezu ukusebenza kwe-case-sensitive. Uma zonke izithembiso nomkhiqizi iyogcwaliseka ngokuphelele, kungenzeka ukukhokhela iphakethe "Omega" ruble 700. Empilweni yezingane akakwazi ukuzisindisa!
Ngo "Smart Omega" ukwamukelwa Umsebenzisi we izidakamizwa ezinzima elula. Futhi kuyamjabulisa. Phela, ngisho nomuntu kude imithi, njalo ngeke baqonde indlela ukuthatha amaphilisi.
Njengoba umkhiqizo wethu itholakala ifomu capsule, ingane ngaphambi kokudla (noma ngesikhathi sokudla) kuyodingeka ukuba igwinye "iphilisi", ugeze phansi ngamanzi amancane. Kungenzeka futhi ukuhlafuna izindlela. Zingaki izikhathi okudingeka ukuthatha izidakamizwa? Izingane kuze kube iminyaka engu-14 - 1 capsule ngosuku, kodwa omdala - 2. Isikhathi reception, kanye umthamo ngqo udokotela ekwelapheni.
Ngaphandle abazali zanamuhla zithi abafundi engcono ( "isixhumanisi" phakathi ikakhulukazi) ukunikeza 2 Amaphilisi "Omega" ngosuku. Ngakho kusebenta kusobala. Nasi umkhiqizo ezithakazelisayo "Smart Omega" izingane. Umyalelo, intengo kanye ukuncoma kwe-hlelo, thina manje eyaziwa. Kodwa bacabanga odokotela nabazali mayelana nokusetshenziswa amaphilisi ezinjalo?
umbono nodokotela bezingane
Uma unanoma yimiphi imithi izingane, kubalulekile umbono wezokwelapha mayelana nokusebenza kahle isicelo. Uma ngikhuluma iqiniso, kukhona kuphela Izibuyekezo elimnandi. Odokotela bathi ayikho indlela engcono ukwedlula "Smart Omega" izingane. Lesi sidakamizwa akuyona ngokushesha kuphela amuncwa wumzimba, futhi akakubangeli komzimba. Futhi kuyasiza ngezifo eziningi.
intuthuko ethile ephawuleka at angomahlalela ingane syndrome "ukukhathala okuphakade". Odokotela bezingane zithi "Omega" ngokushesha ukuxazulula inkinga. Futhi akuseyona ekukhathaza futhi abazali noma izingane. Vele okudingayo abafundi abangamaNgisi abaningi kangako! Futhi, ngenxa yokuswela amavithamini A no D iba inkinga enkulu izingane zanamuhla. Nge "Omega" ke kuzodlula side. Ngomqondo onabile, ke enjalo kuwufanele ukulalela umbono wezokwelapha ezinjalo. Kodwa futhi ukuthi abazali bacabanga, futhi, ungakhohlwa.
Futhi yini engase ishiwo ngabo abathengi Izithako? Sesiyazi ukuthi hlobo luni "Smart Omega" kufundiswe izingane, intengo kanye nezincomo ukusetshenziswa. Kodwa ingabe lokhu izidakamizwa ngempumelelo ngokoqobo? Phela, izindleko akuyona kancane ngakho. Futhi ukuthenga iyasilela, ithuluzi engenamsebenzi ngomntwana nje akwenzi mqondo.
Ngenhlanhla, ezimweni eziningi, abazali aneliseke ukusetshenziswa "Omega". Abantu abaningi bathi izingane zabo enkulu wamukele lezi amavithamini. Ikakhulukazi oneminyaka engaphansi kwengu-6-10. Futhi akukho izinkinga reception abangu waphawula. Naphezu kweqiniso lokuthi indlela yokwakheka izithasiselo kuhlanganisa engathandwa ngabaningi amafutha inhlanzi, ukunambitheka uhlala. Futhi kwenza ukuphila kube lula ukuze abazali.
Ngokuphathelene lempumelelo kwakukhona nemibono ehlukene ngokwenkolo. Lomunye umuntfu wake watsi kwenqubekela phambili enkulu phezu "Omega Smart" akukho. Futhi ungenza ngaphandle kwalezi onikwa izingane. Kodwa kukhona imicabango yabantu ukuthi bagomela ngokuthi kakade emva mayelana 7 izinsuku engayitholi njalo izidakamizwa esikoleni kukhona okukhulu "shift" sinempilo. Ingane iqala ukusebenza, yokufunda kangcono, ufunda izinto ezintsha eziningi, kanye nje nesithakazelo empilweni. Lena kwaphawuleka ngokukhethekile ezinganeni, owake wahlushwa njalo isimo ecindezelekile. Ngakho, i-trust "Omega Smart" kungaba. Kodwa lapha ukuthenga izidakamizwa ngamanani amba eqolo ezifana noma cha - wonke umuntu uyazinqumela. Uma hhayi lesi sidingo esiphuthumayo-ke, i-temusho, ungenza lokho abanye nozakwabo eshibhile.
"Fervex" izingane: yokusetshenziswa, nozakwabo yangempela